Safiirkii Hore Ee Mareykanka Ee Soomaaliya Oo » Axadle Wararka Maanta
Safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya oo
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Sep 23, 2021
Washington (Axadle) – Safiirkii hore ee Maraykanka ee Soomaaliya Mr. Stephen M. Schwartz, ayaa ka hadlay dariiqa Gobaladda Waqooyi u mari karto aqoonsi buuxa oo ay ka hesho Beesha Caalamka, iyo caqabadaha hadda haysta..
Mr. Stephen M. Schwartz oo Waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyey warbaahinta Gobaladda Waqooyi Chronicle, ayaa sheegay in Gobaladda Waqooyi Muddadii 30-ka sano ahayd ee u dambeeyay qabsatay shaqooyin waaweyn, kuwaasi oo loo baahan yahay inay sii waddo.
Diblumaasigan ayaa ka warramay xidhiidhkii uu Madaxda Gobaladda Waqooyi la lahaa xilligii Maraykanka u fadhiyey Magaalada Muqdisho iyo shaqooyin dhex maray, waxaanu yidhi “Gobaladda Waqooyi waxay qabatay shaqo aad u weyn, maalgelin iyo joogtaynta dhammaan hawlaha dawladda. Sidaas darteed, qof kasta oo doonaya in uu ganacsi la sameeyo Gobaladda Waqooyi waa in uu la macaamilaa maamulkeeda iyo awoodeeda.”
Ambassador Stephen M. Schwartz wuxuu sheegay oo kale “Intii aan xilka hayey, aniga iyo shaqaalaha safaaradda waxaan si wanaagsan uga wada shaqaynnay madaxda Gobaladda Waqooyi arrimo badan. Waxaan la macaamilnay mas’uuliyiinta iyo hay’ado lahaa awood wax ku ool ah oo xakameeya xaaladaha aan ka shaqaynay. Waxaan xusuustaa hal arrin oo muhiim ah oo ku lug leh caawinta muwaadiniinta Maraykanka ah ee ku nool Gobaladda Waqooyi taas oo tiro ka mid ah saraakiisha Gobaladda Waqooyi ay bixiyeen kaalmo muhiim ah,” ayuu yidhi.
As smartphone penetration increases, Hormuud’s new…
Gaddafi’s son can run for president again (Libyan…
Waxa uu intaa ku daray oo uu ka hadlay sida uu u arko in Gobaladda Waqooyi ku heli karto Ictiraaf Caalamo ah “Su’aasha ah in madax-bannaanida Gobaladda Waqooyi uu caalamku aqoonsado, ayaa sida cad mudnaanta koowaad u ahayd mas’uuliyiinta Gobaladda Waqooyi muddo 30 sano ah. Aragtidayda, oo aan la wadaagay madaxda sare ee Gobaladda Waqooyi, ayaa ah in sida ugu wanaagsan ee yoolkooda loo fulin karo ay tahay heshiis wada-hadal oo lala galo dawladda Soomaaliya.”
Mr. Schwartz oo hadalkiisa sii wata ayaa bixiyey Tusaaleyaal arrintaa la xidhiidha “Dhammaan dawladaha cusub ee kuraasida ka helay Qaramada Midoobay, go’aaminta ugu dambaysa ee aqoonsigooda caalamiga ah, waxay ku heleen oggolaanshaha dawladihii hore ee ay ka tirsanaayeen. Tusaaleyaashii ugu dambeeyay waa Itoobiya oo ogolaatay madaxbannaanida Eritrea, Suudaan waxay ogolaatay madax-bannaanida Koonfurta Suudaan, Indonesia waxay oggolaatay madax-bannaanida Timor Leste, Serbia waxay oggolaatay madax-bannaanida Montenegro. Taas bedelkeeda, Serbia ma oggolaan ku dhawaaqistii Kosovo ee madax-bannaanida in kasta oo ay aqoonsadeen ku dhawaad ??100 dal, Kosovo ma fadhiyo Qaramada Midoobay ee waxay la halgameysaa sidii ay u gaadhi lahayd madaxbannaani buuxda, sidaa darteed Haddii wada xaajoodyada lala yeelanayo mas’uuliyiinta Muqdisho ay horseedaan madaxbannaani, waxa aan dhici karin ayaa ah in Muqdisho ay sii dheerayso go’aaminta maqaamka Gobaladda Waqooyi, iyada oo diidan inay gasho wada xaajood dhab ah.”
Ugu dambayn, Diblumaasigan Ameerikaanka ah oo la waydiiyey wuxuu kula talinayo Gobaladda Waqooyi, si ay yoolkeeda u gaadho, ayaa ku jawaabay “Waxaan u malaynayaa in waxa ugu wanaagsan ee Gobaladda Waqooyi samayn karto si ay ula falgasho adduunka uu yahay inay sii waddo hagaajinta arrimaheed gudaha. Dhisidda dawlad leh nabadgelyo iyo ku-dhaqanka sharciga, dhaqaale xoog leh oo koraya, dad caafimaad qaba oo waxbartay, iyo kaabayaal wax-soo-saar leh, kaasi ayaa u noqon lahaa adeeg weyn dadka reer Gobaladda Waqooyi. Waxay sidoo kale soo jiidan doontaa ganacsiyada dowladaha ka baxsan (Maalgeshiga)…” ayuu yidhi.
Waxa uu intaa sii raaciyey in Gobaladda Waqooyi ay Maraykanka ku leedahay martabad weyn “Gobaladda Waqooyi waxay ku leedahay matalaad aad u karti badan Maraykanka, taana waxaa sii xoojin kara booqashooyin heer sare ah oo marmar ay yeeshaan hoggaamiyeyaasha labada dawladood.”
Isha: Wargeyska Geeska